PSJTV | दिल्लीमा अचाक्ली प्रदूषण, सास फेर्नसमेत गाह्रो
केही दिनयताको प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी दिल्ली र आसपास क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नसमेत गाह्रो भएको छ।
दुई सताअघिसम्म पनि दिल्लीको आकाश खुला रहेकामा केही दिनयता प्रदूषणका कारण पूरै धुम्म भएको खबर कान्तिपुरमा छ।
दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा रहेका कलकारखाना, अत्यधिक सवारीसाधन तथा पन्जाब र हरियाणाका खेतमा पराल जलाएका कारण यो हदसम्म प्रदूषण बढेको अनुमान गरिएको छ।
दिल्ली सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्किन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ।
उर्फ सडक जाम ! ८ किलोमिटर पार गर्न २ घण्टा
राजनीतिक आडमा ३६ गुन्डा नाइके, कुन पार्टीमा को-को ?
घरायसी सामग्री बनाउन प्रयोग हुने बाँसबाट साइकल बनाइएको छ। हाब्रे नाम दिइएको साइकल विद्युत्बाट चल्ने गरी बनाइएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ। साइकलमा टायर, बस्ने सिटका फलाम र स्टिल प्रयोग गरिएको बाहेक ...
6th Nov 2019 पिएसजे टिभी
काठमाडौँ: पूर्वका कवि सुन्दर कुरुपको कविताकृति ‘पृथ्वीको आविष्कार’ राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थियटरमा शनिबार लोकार्पण भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति वैरागी काइँलाको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कविताकृति सार्वजनिक भएको हो । विमोचन समारोहमा ...